Doğu Ekspresi'nde Akademik Etkinlik - RayHaber
Homeတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီအရှေ့တိုင်း Express ကိုအပေါ်ပညာရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ
အရှေ့တိုင်း Express ကိုအပေါ်ပညာရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ
28 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 06 တူရကီ, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ခရီးဝေးရထားစနစ်များ, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ 0
အစဉ်အလာသြဂုတ်လ 27 31- Kars ၏နဝမပေါ်ရှိ "စာရင်းကိုင်အတွေးအခေါ်စခန်း" ကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပစာရင်းကိုင်ပညာရှင်များနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖောင်ဒေးရှင်း (Modave), '' အထဲကယူသွားတတ်၏။
35 ကွဲပြားခြားနားသောတက္ကသိုလ်များနှင့်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများ 45 Kars ခရီးသွားအလုပ်လုပ်ဘို့မကြာသေးမီနှစ်များတွင်တစ်ဦးဖြစ်ရပ်ဆန်းဖြစ်လာသည်သော Orient Express, ရွေးယူကြ၏။
အလုပ်အမှုဆောင်ဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ Ganita Wolf က "ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့နှစ်စဉ်ရှေးဟောင်းပရဒိသု, ငါတို့ကဲ့သို့ကောင်းစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဧရိယာ၏ဒဿနအတွေးများကိုသို့ရေငုပ်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနှင့်ကျွန်တော်တစ်ဦးအသက်မွေးမှုအသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်အဖြစ်သွားနှင့်စာရင်းကိုင်သည့်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းနှင့်အတူပြည့်စုံနေကြသည်ရာအရပ်နှစ်ဦးစလုံးအားမျှဝေပညာရှင်တွေထောက်ပြသွားကြပါတယ်။ စည်းလုံးညီညွှတ်ရေး, ငါတို့တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိအစွမ်းသတ္တိကိုချေးငှားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုပေါက်နေသည်။ ဤနှစ်တွင်ငါတို့သည်အ Orient Express ကိုအပေါ် program တစ်ခုစတင်စိတ်ကူးနှင့်အတူထွက်ထားကြ၏။ TCDD, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဝန်ထမ်းများရန်သင့်အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ "သူကဆိုသည်။
Assoc ။ ဒေါက်တာ က The Orient Express ကို "ဟုအဆိုပါလမ်းကြောင်း၏ထူးခြားသောအလှဓာတ်ပုံရိုက်နှင့်စီးနင်းပျော်စရာခဲ့လူမှုမီဒီယာဖြစ်ရပ်ဆန်းအတွက်ဝေမျှဖို့အထူးသဖြင့်လူငယ်: Fevzi ဆိုပါတယ် Serkan Özdemirလည်းပြောခဲ့သည်။ ပင်ကောင်းစွာရိုးရာ Orient Express ကိုအပြင်၌, ခရီးသွား Orient Express ကိုတင်လိုက်တယ်။ ငါတို့သည်လည်းနှစ်ဦးစလုံး Orient Express ကို Orient Express ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာအဆိုပါပညာရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများသို့ပေါင်းစည်းနိုင်ပါတယ်နှစ်ဦးစလုံးအတှေ့အကွုံကိုပြသချင်တယ်။ ဤအခါသမယတွင်ကျနော်တို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဝန်ကြီးဌာနနှင့် TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဝန်ထမ်းများ, ငါတို့၏ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖော်ပြ။ "
အစုလိုက်အပြုံလိုက်သေနတ်ပစ် Kars ပြုမူပြီးနောက်ပညာရှင်တွေတူရကီရထားဘူတာသမိုင်းဝင်အဆောက်အအုံအတွက်သိမ်းယူကြ၏။
Eskişehir Express, Capital ကို Express, သမ္မတနိုင်ငံ Express, Sakarya Express ကိုရထားနဲ့ကြိမ် 02 / 09 / 2012 ESKİŞEHİR EXPRESS, EXPRESS မြို့တော် EXPRESS သမ္မတနိုင်ငံ, Sakarya EXPRESS ရထား, Haydarpasa - Eskisehir - Haydarpaşaကနေနေ့တိုင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ တူရကီ - Eskisehir - တူရကီအကြားလည်ပတ်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားမှသူတို့ကဒေတာဆက်သွယ်မှု။ (တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းလမ်းဖောက်ပေးလိုက်တာနယ်ပယ် 1 ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 ထံမှ 24 လကြာတစ်ကြိမ်ဆိုင်းငံ့ခံခဲ့ရသည်။ ) Departure နာရီ: ESKİŞEHİR EXPRESS: Eskişehirငွေကျပ်: 08.45-Haydarpaşa V ကို: 12.52 Haydarpasa ငွေကျပ်: 07.00-Eskisehir V ကို: 10.54 Capital EXPRESS: Eskisehir ငွေကျပ်: 12.45-Haydarpasa V ကို: 16.50 Haydarpasa ငွေကျပ်: 08.00 Eskisehir V ကို: 14.57 သမ္မတနိုင်ငံ Express Eskisehir ငွေကျပ်: 16.45-Haydarpasa V ကို: 20.42 Haydarpasa ငွေကျပ်: 14.30 Eskisehir V ကို: 18.29-Haydarpasa V ကို: 19.45 SAKARYA Eskisehir K သည်ကိုဖော်ပြ: Haydarpasa K သည် 23.39: 17.30-Eskisehir V ကို: 21.24 (ဒီလမ်းကြောင်းသစ် yhty ချိတ်ဆက်မထားပါ။ ) DISTANCE အထိ: 313 ...
orient Express ကိုတောင်းဆိုချက်များ ... အဆိုပါဆေးတစ်လက် Hale က, ခရီးသွား Anatolian Express ကိုမရွှေ့နိုင်ပါတယ်ဆိုက်ရောက် 29 / 11 / 2018 အပေါ်သို့ပြုမူဖို့ခရီးသွားအေးဂျင့်များ၏တောင်းဆိုချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ orient Express, Anatolia ရထားဘို့စည်းရုံးလုံးဝခေါက်ပါလိမ့်မယ်စတင်ခဲ့သည်။ မတ်လမှဒီဇင်ဘာလကနေအရပျကိုရှာတွေ့မှတိုးမြှင့်အကျိုးစီးပွားများ၏ Orient Express ကိုအပေါ်အသစ်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆွဲဆောင်မှုအရှေ့ Ekspresi'yl Kars ခရီးစဉ် ... နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပြုလုပ်မဖြစ်နိုင်သလောက်ဖြစ်လာသည်။ TCDD, အတိတ်တွင်အိပ်ရာလှည်းများ၏အရေအတွက်ကိုတိုးပွားစေရာတစျခုလက်ရှိနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများကြောင့်ဝယ်လိုအားတွေ့ဆုံရန်မလုံလောက်ဖြစ်ကြသည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်း "ခရီးသွားဧည့်ရထား" ၏အဆိုပြုဖြေရှင်းချက်အနေဖြင့်ဝယ်လိုအားနှင့်တွေ့ဆုံရန်မနိုင်သူကိုဖောက်သည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်း, ခရီးသွားရထားအစ္စတန်ဘူလ်နှင့် Kars အကြားလည်ပတ်မည်ဖြစ်ကြောင်းကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ခရီးသွားလုပ်ငန်းထုတ်ကုန် Transsiberian ဥပမာတစ်ခုမှာ ...
အဲဒီအစားခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းအဘိဓါန် Eastern Express ကို Express ကိုလာ၏ 25 / 02 / 2019 ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီး Nuri Mehmet Ersoy, Kars Sarikamis ၏ခရိုင်အတွင်းရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေတစ်စီးရီးမှာတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Ani ကြေညာလိုက်ပါတယ်Sarıkamışနှင်းလျှောစီးစင်တာထရီနာ Pavilion, Ani ဆိုက်ကိုနှင့် Kars ဝန်ကြီး Ersoy Citadel browsing ယင်း၏ပတ်ဝန်းကျင်သည်6လတူးဖော်အစီအစဉ်ကိုအပျက်အယွင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည် "ဟုအဆိုပါကာလအတွင်းတိုးချဲ့ပါလိမ့်မယ်နှစ်ဦးစလုံးတူးဖော်အတွက်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်တွေနဲ့အနုပညာသမိုင်းပညာရှင်များ၏အရေအတွက်ကိုတိုးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ " သူကပြောခဲ့သည်။ Ersoy ဝန်ကြီးကသူ့မိန့်ခွန်းထဲမှာ '' ခရီးသွားလုပ်ငန်း Express ကို '၌လုပ်ကိုင်သော AK ပါတီပြည်နယ်ကိုသမ္မတ Orient Express ကိုလမ်းကြောင်းစတင်နိုင်ပါသည်အလုပ်အတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်မှာ။ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီး Nuri Mehmet Ersoy, Kars အရှေ့တိုင်း Express ကိုနှင့်အတူယမန်နေ့ညဦးယံအချိန်ရောက်ရှိနေပြီ ...
နေကြာချိုင့်စက်ဘီးအတွက်သိသာထင်ရှားသောဖြစ်ရပ်များ 20 / 05 / 2019 Sakarya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်စက်ဘီး Sunflower ချိုင့်ဧည့်သည်ကိုကြိုဆိုနေဆဲဖြစ်သည်။ အလုပ်အကိုင်ကျန်းမာရေးနှင့်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးရက်သတ္တပတ်အထိမ်းအမှတ်ပွဲများကျင်းပနှင့်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကတည်းဖြတ်ချိုင့်စက်ဘီး Camila ရပ်ကွက် Sakarya ပြည်နယ်များ၏အခြေအနေတွင်ဖြစ်ရပ်များ။ Sakarya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်လူငယ်နှင့်အားကစားဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဦးစီးဌာနကဧည့်သည်ကိုကြိုဆိုမှဆက်လက်သမ္မတစက်ဘီး Sunflower ချိုင့်အတွင်းလည်ပတ်ဆက်လက်။ ဤအခြေအနေတွင်ခုနှစ်, edited 4-10 ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကချိုင့်စက်ဘီး Camila ရပ်ကွက် Sakarya ပြည်နယ်များ၏အခြေအနေတွင်မေလနှင့်အလုပ်အကိုင်ကျန်းမာရေးနှင့်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးရက်သတ္တပတ်အထိမ်းအမှတ်ပွဲများကျင်းပနှင့်ဖြစ်ရပ်များအကြားနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပခဲ့သည်။ သူငယ်တန်းကျောင်းသားများကို၎င်းတို့၏ဟန်ချက်ဆိုင်ကယ်, စက်ဘီး၏လူငယ်နှင့်အားကစားဆိုင်ရာပြည်နယ်ညွှန်ကြားမှုပြသ ...
ခရီးသွားလုပ်ငန်းကနေ Orient Express ကိုအပေါ်ဂိမ်းလက်မှတ်တွေ! 22 / 12 / 2017 အရှေ့ Express ကိုတစ်အိပ်အချိန်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်မဟုတ်ပါရောင်းချခဲ့လက်မှတ်တွေကိုထုတ် running ဖြစ်ပါတယ်။ နက်ဖြန်နေ့၌ရဲ့ရထားလက်မှတ်၏ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်ချင်သောသူတို့အားကွောငျးတှေ့ဘူးဘို့ရက်သတ္တပတ်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများသည်အကြား 1200 2000 ပေါင် '' Karsrail '' အရောင်းရဆုံးခရီးစဉ်အထုပ် POUNDS, တူရကီကနေ Kars ထံသို့သွားလေ၏။ တုံ့ပြန်မှုလက်မှတ်မတှေ့နိုငျသူများသည်။ ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန "နှစ်စဉ်အစီအစဉ်နှင့်အတူကားများငှားရမ်းရန်အလှည့်လည်ကုမ္ပဏီဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဒါပေမဲ့ဒီလက်မှတ်ရှာဖွေတာမဟုတ်သည့်အကြောင်းရင်းမဟုတ်ဘူး" ဟုသူကဆိုသည်။ ပြည်နယ်မီးရထားတူရကီ-Kars အဘိဓါန် Eastern Express ကိုတစ်ခုခုကွဲပြားခြားနားသောလမ်းကြောင်းများလုပ်ချင်သောသူတို့အား, တစ်ခရီးများအတွက်အထူးသဖြင့်ဆောင်းကာလကိုတနင်္ဂနွေရွေးချယ်မှုအတွက်, သမီးကညာကိုခရီးစေသည်။ အထူးသဖြင့်ဒီခရီး၌အိပ်ပျော်အကြောင်းကို 27 နာရီ, ညွန်းပါသည်။ Kars ရထားအရှေ့ကိုသွား ...
Hepsiburada အတွက်မော်တော်ကားအရောင်း Start ကို
BCCI, 'ခိုင်ခံ့တူရကီက' ပူးတွဲထောက်လှမ်းရေး Continues ရွှေ့ဖို့
Eskişehir Express, Capital ကို Express, သမ္မတနိုင်ငံ Express, Sakarya Express ကိုရထားနဲ့ကြိမ်
orient Express ကိုတောင်းဆိုချက်များ ... အဆိုပါဆေးတစ်လက် Hale က, ခရီးသွား Anatolian Express ကိုမရွှေ့နိုင်ပါတယ်ဆိုက်ရောက်
အဲဒီအစားခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းအဘိဓါန် Eastern Express ကို Express ကိုလာ၏
ခရီးသွားလုပ်ငန်းကနေ Orient Express ကိုအပေါ်ဂိမ်းလက်မှတ်တွေ!
Wagon အရှေ့တိုင်း Express ကို Start ကိုအပေါ် Leases
(ဓာတ်ပုံပြခန်း) ကျင်းပအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့နေ့ပွဲအပေါ် TCDD အမျိုးသမီးများနေ့ပလက်ဖောင်း
တနည်းကား, ထိုအဖြစ်အပျက်မှာပြည့်စုံသောအစီအစဉ်ကို logitrans အတူတကွဆောင်တတ်၏